Wasiirkii Hore Amniga "Ciidamada Xasilinta Waxaa Loo Dhisay Xasuuqa Shacabka Muqdisho" -
HomeWararkaWasiirkii Hore Amniga “Ciidamada Xasilinta Waxaa Loo Dhisay Xasuuqa Shacabka Muqdisho”
Wasiirkii Hore Amniga “Ciidamada Xasilinta Waxaa Loo Dhisay Xasuuqa Shacabka Muqdisho”
Wasiirkii hore ee Amniga Xukuumaddii hore C/risaaq Cumar Maxamed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay jirdil uu askari ka tirsan ciidanka Xasilinta Caasimadda Muqdisho u geystay qof rayid ah.
C/risaaq Cumar Maxamed ayaa ugu baaqay dowladda inay baaritaan ku sameyso dhacdadaas askari ka tirsan Ciidanka Xasilinta uu ku garaacayo qof rayid ah.
Waxaa uu sheegay in ciidanka Xasilinta Muqdisho aanay laheyn wax sharci ah oo ay ku shaqeeyaan, jiritaankoodana ka hor imaanayo qodobka 126aad ee dastuurka.
“Dowlada ayaa ciidankani ku sheegtay kuwo kumeel gaar ah oo lagu aas aasay go’aan ay gaareen Golaha Wasiiradu gaareen, Waa wax laga xumaado in aan aragno ciidankani oo garaacaya dad rayid ah oo an waxba galabsan, Dowladdu waa inay arinta baaritaan kusameysaa”ayuu yiri Xildhibaan C/risaaq qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray.
Muuqaal la soo dhigay baraha Bulshada ayaa muujinayay askari labisan dareyska ciidanka xasilinta oo garaacaya qof rayid ah, waxaana arrintan ka dhalatay fal celino kala duwan oo qabsaday baraha bulshada.
Muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka jiray tacadiyo la sheegay inay geysanayeen ciidanka ammaanka, iyadoo lagu toogtay dhalinyaro ka tirsan darawalada bajaajta Iyo Kuwa Shacabka ah.